Farmaajo oo ka tacsiyeeyay geerida Yusuf Xaaji | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo ka tacsiyeeyay geerida Yusuf Xaaji
Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay geerida Allaha u naxariistee Maxamed Yuusuf Xaaji oo ka mid ahaa siyaasiyiinta Soomalida ee dalka Kenya.
KENYA, Naiorbi - Maxamed Yuusuf Xaaji oo ahaa Senetarka ismaamulka Gaarisa, kana tirsanaa Aqalka Sare ee dalka Kenya ayaa ku geeriyooday magaalada Naiorbi waxaana ka tacsiyeeyay Madaxweynaha waqtigii sharciga ahaa ka dhamaaday ee Soomaliya Farmaajo.
“Waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa dhammaan qoyska iyo ehelada Alle ha unaxariistee Senator Maxamed Yuusuf Xaaji oo xilal kala duwan oo muhiim ah kusoo matalay Soomalida Kenya. Waxaan Alle uga baryayaa in uu Jannatul Fardowsa ka waraabiyo, eheladii iyo qaraabadii uu ka tagayna samir iyo iimaan ka siiiyo”. Ayuu yiri Farmaajo.
AUN Yusuf Xaaji oo ahaa 80 jir ayaa soo noqday barasaab gobolka Rift valley intii u dhexeysay 1970 iyo 1998 , Xildhibaan Wariir iyo jagooyin kale oo muhiim ah ayuu qabtay
Waxaa lagu xaglin jiray inuu aad ugu dhawaa Madaxweynihii hore ee Kenya Daniel Arab Moi. Wuxuuna dhawaaanahaan hoggaaminayay guddi loo xil saaray inay ka shaqeeyaan wax ka badel la doonayo in lagu sameeyo dastuurka dalka Kenya.